Muxuu Farmaajo Ku Macneeyey Guusha Abiy Ee Doorashadii Ethiopia? - Caa...
Muxuu Farmaajo ku macneeyey guusha Abiy ee doorashadii Ethiopia? – Caa…
Muqdisho (Wararka Maanta) – Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta war kasoo saaray natiijadii doorashada Ethiopia, taasi oo uu ku guuleystay Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed.
Xisbiga uu hogaamiyo ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ee Prosperity Party (PP) ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashooyinkii baarlamanka Ethiopia, waxaa sidaas ku dhowaaqay guddiga doorashada.
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo goordhaw dib ugu soo laabtay magaalada…
Wararka Maanta : Ciidamada AMISOM oo sheegay in ay Kudhaa ku dileen 11 katirsan kooxda...
Wararka Maanta : Wasiir FIQI oo u jawaabay Ilhaan Cumar - Dumaashi dagaalka nala soo ga...